Ohiri isi kacha mma nke nwere ihe mkpuchi | Rayson
Ahaziri Natural latex ohiri isi Thai emepụta siteChina
Best 10Inch White Memory ụfụfụ matarasị Supplier
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa Best Latex ohiri isi na mkpuchi Supplier
Arụ ọrụ nke ngwaahịa a abụrụla nke ọma site na ike anyị R
& D otu.
R $ $> Rayson Global Co., Ltd bụ Sino-US njikọta ọnụ, nke e guzobere na 2007 nke dị na Shishan Town, Foshan High-Tec
Anyị na-agbaso usoro njikwa njikwa ọkọlọtọ iji hụ na ngwaahịa anyị na-ezute ma ọ bụ gafere atụmanya ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ ndị na-ere ahịa mgbe achara ahịa maka ụwa niile. Ruo ugbu a, Rayson agafeela asambodo sistemụ njikwa njikwa mba ụwa. Ngwa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị
na-ọnọ na otutu imewe, na-ekwe nkwa àgwà, na asọmpi ahịa. Mgbe afọ nke mmepe, anyị guzosie ike ogologo oge nkwado mmekọrịta anyị na ndị ahịa n'ụwa nile. Biko nwee obi ike na anyị nwere ikike ịbupụ ngwaahịa anyị na ọ nweghị mmebi dakwasịrị ngwaahịa enyere. Anyị ji obi anyị na-anabata gị ase ma na-akpọ. Olee otú m ga-esi ụfọdụ n'omume？ Mgbe ị na-egosi na anyị na-enye na-ezite anyị sample na-eri, anyị ga-rụchaa sample n'ime 15 ~ 20 ụbọchị. Nwere ike ịjụ ụlọ ọrụ awara awara iji bulie ihe nlele site na ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ ịnwere ike iziga anyị nọmba DHL, FedEx ma ọ bụ UPS na-anakọta nọmba akaụntụ, anyị nwere ike zitere gị ihe nlele ahụ na akaụntụ gị. logo na ngwaahịa? Anyị nwere ike ime akwa ụra dị ka imewe gị si dị ma ọ bụ nye ọrụ OEM naanị ị chọrọ ka ị nye anyị ihe osise gị ma ọ bụ foto foto. 1. Tinye katoonu n’elu ụlọ dị larịị n’ime ụlọ ihi ụra gị, jiri nwayọ wepụ matarasị ma dina n’elu ihe ndina gị. Kpachapụ anya bekee mpụga akpa na mkpa iji jide n'aka na ọ bụghị bee plastic ọjọọ n'ime ma ọ bụ matarasị, adịghị kpọpụ a mma.
3.Rụfee ihe mgbochi a na-ekpuchi ekpuchi na akwa gị 4. Jiri nlezianya belata akpa rọba tinyere elekere ka akwa ahụ na-amalite ịmalite ngwa ngwa, Wepu akpa rọba. Kwe ka awa iri abụọ na anọ mee ka akwa akwa ọhụrụ gị gbasaa n'ụzọ zuru ezu.